Rohde LGD4033 vody (1165910-22-4) mpanamboatra - Phcoker
SKU: 1165910-22-4 Sokajy: Serasera Sarmana
Rohana LGD4033 voly (1165910-22-4) video
Ny voankazo LGD4033 roja fantatra amin'ny anarana hoe Ligandrol / anabolicum, dia mpanodina sela mpanome tsimok'aretina androgen (SARM) ho an'ny fitsaboana ny toe-piainana toy ny hozatra sy ny osteoporose.
Ny poofa LGD4033 roapolo dia novolavolaina mba hanamboarana ny mônika anabolika eo amin'ny tazomoka. Iray amin'ny karazana SARM vaovao izy io; Mampisy vokatra mitovy amin'ny steroid izy io saingy tsy misy ny vokany mahatsiravina. Raha ny zava-misy, raha ny marina, ny SARM no matanjaka indrindra eo amin'ny tsena ary vaovao tsara izany raha te hahazo tombony lehibe ianao.
Rohaka LGD4033 vovoka (1165910-22-4) Specifications
Product Name Roha LGD4033 vovoka
Anarana simika 9-Chloro-2-ethyl-1-methyl-3-(2,2,2-trifluoroethyl)-3H-pyrrolo(3,2-F)quinolin-7(6H)-one
Drug Class (SARM)
molekiolan'ny Formula C14H12F6N2O
molekiolan'ny Wvalo 338.253 g / mol
mitsonika Point 105-107 ° C
Solubility Fahamendrehan'ny rano: 0.00474 mg / mL
Rohida LGD4033 popplication (SARM) ho an'ny fitsaboana amin'ny ankapobeny ho fitsaboana ny toe-piainana toy ny hozatra sy ny osteoporose.
Rohe Raw LGD4033 vovoka (1165910-22-4) Description
Ny LGD4033 dia matetika antsoina hoe Ligandrol na LGD ary novokarin'ny Ligand Pharma. Ny Ligandrol dia anisan'ny fianakavian'ny mpandrindra ny endri-tsolosaina amin'ny safidy Androgen (SARM). Mba hahalalanao tanteraka ny atao hoe LGD4033, mila mahafantatra ny atao hoe SARM isika. Fantatra amin'ny ankamaroan'ny karazan-tsakafony izany, izay tsy misy ny fiantraikany eo amin'ny endri-pihetseham-po. Anisan'ny mahatonga izany ho malaza amin'ny mpanao biriky sy atleta izany.
Rohana LGD4033 vovoka (1165910-22-4) Mechanism of Action
Ny Anabolicum dia manao zavatra toy ny fantsom-panafody anabolika amin'ny habokana, satria izy io dia manana fahafahana hampitombo haingana ny fananganana ny hozatry ny hozatra rehefa mampihena ny fatotra manontolo.
Ny orinasa pharmaceutika dia manondro ny LGD4033 ho toy ny SARM na "modulator mpanova ny androgen." LGD4033 dia mifandray amin'ny sela mpanome rantsantanana voafantina hita amin'ny taolana sy ny hozatry ny taolam-paty, izay mamela azy hisoroka ny fifandraisana amin'ny taova amin'ny taova lehibe amin'ny vatana toy ny fo, dipoavatra, prostaty ary dipoavatra.
Vokatr'izany, io SARM io dia tsy tonga amin'ny vokatry ny voka-dratsy hafa mifandray amin'ny steroïde izay miezaka ny mitsabaka amin'ireny taova lehibe ireny amin'ny alàlan'ny vatana. Ny fijerena ny LGD4033 dia tena mitovy amin'ny fiaramanidina miaraka amin'ny Test-E voalohany, ary izany dia mahatonga azy ho lavorary ho an'ny fanolanana ny vatana. Izany koa no zavatra faran'izay akaiky indrindra ho azonao amin'ny testosterone raha tsy miteraka ny vokany mahatsiravina.
Tsara ho marihina eto fa mety hitarika ny fihazonana rano kely ny Ligandrol rehefa mihinana sakafo matsiro be loatra sy ny sikitry D-bol, fa tsy misy zavatra tsy azonao atao. Ambonin'izany, dia haingana be ny vokany.
soa ny Rohda LGD4033 roah (1165910-22-4)
◆ Tanjaka: LGD4033 dia mahafinaritra amin'ny famakiana ny lemaka iray. Araka ny ankamaroan'ny mpampiasa, ity SARM ity dia afaka mampitombo hery hery kardia fialamboly ary manandratra hery mandritra ny telo herinandro.
◆ Fatim-bolo: LGD4033 dia manampy amin'ny fananganana masomboly ara-bolo amin'ny ady amin'ny fihanaky ny muscle fa tsy miteraka ny fampiasana tranokalan'ny voankazo. Satria sarotra ny mitazona ny tazomoka noho ny tavy, dia midika izany fa ny vatana dia manomboka matavy mandoro mba hanohizana ny asa.
◆ Fihetseham-po lehibe: Iray amin'ireo tombontsoa lehibe azo avy amin'ny LGD4033 dia manome anao angovo enina sy hafaliana mandritra ny tontolo andro. Tsy voatery hivezivezy amin'ny zava-mahadomelina sy ny havokavoka mifandray amin'ny zava-mahadomelina hafa ianao, fa ho tsapanao foana isan'andro.
◆ Pumps: Azo inoana kokoa ny hozatra kokoa, hozatra kokoa, ary hozatra mandritra ny fotoana ela rehefa mandeha fiara amin'ny LGD4033 ianao. Ireo vokatra ireo dia mitovy amin'ny zavatra mety ho hitanao raha hifanerasera amin'ny Dianabol na Anavar ianao, izay samy SARMs malaza sy mahery.
Recommended Rohda LGD4033 vovoka (1165910-22-4) Dosage
Ny antsasaky ny LGD4033 dia manodidina ny ora 30. Noho izany dia azo antoka ny maka izany indray mandeha isan'andro amin'ny dosages amin'ny 10mg amin'ny 22mg ary mbola mahazo ny vokatra tsara indrindra avy aminy.
Matetika ao amin'ny SARMs Stack io fitambarana io. Ho hitanao fa mifamatotra amin'ny GW-50156 sy MK-2866 mba hampitombo ny vokatrao. Mba hahazoana ny ankamaroan'ny LGD4033, avereno amin'ny herinandro 8. Ataovy azo antoka fa maka fotoana lavalava ianao mba hanampy amin'ny fitazonana tsara ny mari-pahaizana testosteron.
Raha tianao ny torohevitro dia alefako amin'ny dosage Ligandrol ny 5 amin'ny 10mg isan'andro. Ny halavan'ny bisikileta dia mety amin'ny 6 hatramin'ny herinandro 10. Izany no tian'ny mpampiasa indrindra.
Side effects ny Rohda LGD4033 roah (1165910-22-4)
Ireo tahiry fikarohana amin'izao fotoana izao ao amin'ny LGD4033 dia milaza amintsika fa ny SARM dia tsy misy fiantraikany eo amin'ny sehatra. Azo atao izany indrindra satria ny Ligandrol dia tsy manana natiora. Raha ny fandaniana dia tsy hiteraka olana ara-pahasalamana izay mahazatra amin'ny SARMs, toy ny fihenan'ny volo, ny akne, ny fery, ny tosika amin'ny aty, ny fitehirizana ny rano, ny tosidra, ny olana amin'ny prostate, ary ny aretim-bary.
Na dia izany aza dia misy fiantraikany eo amin'ny famandrihana prostate malemy izy io fa tsy izany ihany no hitranga raha raisinao amin'ny dosie avo tsy mety. Raha tsy izany dia tokony hijanona ho mahazatra ny lamin'ny testosteron. Na dia mivoatra aza ny tahan'ny testosteron, dia hiverina amin'ny herinandro 3 herinandro izy ireo aorian'ny tsy ahafahanao maka ny SARM.
Ataovy azo antoka ny mijery ity lahatsary manaraka nataon'i Ryan Russo ity. Hanome fanazavana misimisy kokoa momba ity SARM ity izy ary inona no andrasana.
1 famerenana for Rohana LGD4033 vovoka (1165910-22-4)
Nahazo poeta LGD4033 mba hitsapana, ny vokatra azo avy amin'ny test dia tena avo lenta sy fahamendrehana!